MPEG Converter: Sida loo Beddelaan MPEG ama From kasta oo qaab kale
> Resource > Beddelaan > MPEG Converter: Sida loo Beddelaan MPEG ama From kasta oo qaab kale
Wondershare MPEG Converter - Video Converter waa Converter awood video oo aad iyo aad buu kaa caawinaysaa in aad si loogu badalo wax video in MPEG in ay soo gudbiyaan in AVI, wmv, MP4, MOV, FLV ama qaabab loo jecel yahay oo kale; sidoo kale loogu badalo videos in kuwa qaabab kulul sida AVI, wmv in MPEG ilaalinta tayada video ah. Waxaa xitaa gelineya inaad si loogu badalo files MPEG si toos ah u qalabka sida iPhone, iPad, iPod, HTC, Blackberry, PSP, PS3 oo dheeraad ah oo loo maqli karo, barnaamijyadooda sida iMovie, Final Cut Pro iwm tafatirka.
1 Import videos to this Converter MPEG
Si aad u dajiyaan videos in barnaamijkan loogu diinta, aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi videos deegaanka si ay taasi app ee Murayaad bidix ama guji "Add Files" ee geeska bidix ee sare ee interface ah loo sameeyo.
2 Dooro qaab wax soo saarka aad rabto in aad ku
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay marka hore kala qaab suuqa kala saarka. Habka ugu sahlan waa in ay si toos ah guji image qaab ku saabsan "Qaabka Output" guddiga. Dooranaysaa qaabka aad rabto in aad halkan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad si loogu badalo videos in MPEG, MPEG-1 ama MPEG-2 ee "Qaabka"> "Video" category waa doorashadaada.
3 diinta Start MPEG
Hit ah "Beddelaan" button ee midigta hoose geeska of this MPEG gacanta Video Converter 's interface si loogu badalo MPEG ama ka kale qaabab video.
Si degdeg ah ka heli files wax soo saarka qaab beddelidda kadib video, kaliya ku dhufatey "Open Folder" doorasho hoose ee interface this MPEG Converter ee in la sameeyo shaqadan.
Qaababka ugu muhiimsan ee MPEG Converter
Beddelaan MPEG in qaabab kala duwan video, sida wmv, MP4, AVI, MKV, MOV, FLV, M4V, 3GP / 3G2, ASF oo dheeraad ah;
Sidoo kale loogu badalo kale qaabab video in MPEG la soomi xawaaraha diinta, ie aad u bedeli karaan AVI in MPEG, FLV in MPEG iwm si sahlan;
Waraaqda Cajalado ka files MPEG oo waxaan iyaga ku badbaadin in qaab kasta oo maqal ah oo caan ah oo ay ka mid MP3, WMA, regelingen, AAC, AC3, FLAC, OGG iyo wixii la mid ah;
Taageer qalabka ballaadhan - aad u bedeli karaan MPEG straightly gudbiyo qalabka macruufka sida iPhone / iPad / iPod, qalabka android ay ka mid yihiin HTC, Motorola, consoles'ka ciyaarta sida Sony PSP / PS3, iyo telefoonada feature ...
In kor loo qaado videos by tafatirka - aad awoodo inaad noola MPEG videos, midowdo files MPEG, xitaa ku dar watermarks / subtitles / saamaynta in files jidka doqonimo fudud.
AVI Converter - Sida loo badalo AVI ama ka soo Video kale ee Mac / Windows
Dhibaatooyinka Dhignaashada Xalinta u MKV
Sida loo soo biir / Isku dar / midowdo M4V Video Files